Aix Arome Cafe Kafe - Imewe Mmewe
Kafe Café bụ ebe ndị ọbịa na-ahụ ebe ha na ebikọ ọnụ na oke osimiri. Nnukwu akwa akwa akwa edobere n’etiti oghere na-arụ ọrụ n’otu oge dịka onye inye ego na inye kọfị. A na-ahụ maka ngosipụta ụlọ ntu ahụ site n'ọchị kọfị gbara ọchịchịrị na nke dull gbara ọchịchịrị. Nnukwu oghere abụọ dị n’elu elu nke abụọ nke “nnukwu bean” na-abụ ezigbo ebe ikuku na ikuku ọkụ. Café nyere tebụl ogologo dị ka ụyọkọ octopuse na egosipụta nke ọma. Igwe eji chandeliers yiri nke a na-enyo enyo na-anya mmiri, mmiri na-egbu maramara na-amịpụta ìhè anyanwụ site na mbara igwe dị ọcha.
Aha oru ngo : Aix Arome Cafe, Aha ndị na-emepụta ya : One Plus Partnership Limited, Aha onye ahịa : Aix Arome Coffee Co. Ltd..